Vaovao - Mandrosoa mialoha • Miampita ny tampon'ny | 2021 Dokam-barotra fanitarana elite elanelan'ny Mengjiaolan isan'andro
Rehefa mamony ny voninkazo amin'ny lohataona, mamo ny toerana. Nanomboka ny 23 hatramin'ny 25 aprily, ny Fujian Mengguolan Daily Chemicals Co., Ltd. dia nanangana mpiasa hanatanteraka ny hetsika fanentanana “Forging Forward • Crossing the Peak” ao amin'ny tanànan'i Julong, County Hui'an.
Ny tanjon'ity asa fitoriana ity dia ny hampiala-voly ny vatana sy ny sain'ny mpiasa, hanatsara ny fihetsem-pony, hamboly ny fanahin'ny mandroso mialoha ary ho be herim-po amin'ny fanamby, mamorona ekipa milay miasa, miasa mafy, mavitrika ary mahomby ary manome aingam-panahy ny tsirairay hanokana ny tenany hiasa amin'ny toe-tsaina feno kokoa.
Tany am-piandohan'ny hetsika dia nampiasa novelom-pomba sy fomba velona ireo mpampianatra mba hanangonana ireo mpiasa rehetra mandray anjara amin'ny fiofanana, ary avy eo dia raisin'izy ireo ny anaran'ny ekipa, fidio ny mpitarika ny ekipa, hamaritana ny fiofanana momba ny hira sy ny ekipa
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Andao jerena ireo zava-nisongadina tamin'ny fanitarana niaraka tamin'i Jun Huan. Mijoroa amin'ny fijoroan'ny miaramila, ampiharo ny finiavana
Arovy miaraka ny voditongony sy ny rantsan-tongotrao amin'ny 60 °. Akatony mahitsy ny tongotrao ary fehezo ny rantsan-tànanao dimy. Ny rantsantanana afovoany dia manakaiky ny stitch an'ny pataloha… feno hery ny tsirairay ary tsy sahy mihemotra na kely aza. Mijoroa mahitsy ary asehoy ny fijery tsara amin'ny fotoana rehetra.
Ireo vondrona madinidinika dia niara-niasa tamin'ny graffiti sy namita ny drafitra ho an'ny "tsingerintaona faha-26" an'ny rakikira kely, ary nifampiraharaha mba hamolavola sary iray feno. Ity seho ity dia voarakitra mazava tsara avy amin'ny fiaramanidina fiaramanidina, izay maneho ny tsodranon'ireo mpiasa amin'ilay rakikira kely.
Miampita ny toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany
Ireo miaramila izay "niampita ny faritry ny fitrandrahana" dia miray hina tokoa. Na inona na inona fahasarotan'ny tetik'asa, ny mpitondra ny rezimanta koa dia mifanampy ary miezaka mamita ilay asa.
Zana-tsipìka manafintohina sy miaro
Hitsambikina anaty rano
Fizarana traikefa an'ny vondrona tsirairay
Amin'ny alàlan'ny andiana hetsika fananganana ekipa, ny tsirairay dia afaka amin'ny asa mavesatra isan'andro, mba hahafahan'ny tsirairay mamoaka tanteraka ny tsindry amin'ny asa sy mankafy ny fifaliana tsy manam-petra eo amin'ny fiainana. Nanjavona tamin'ny tsiro ny famoretana, nihanatanjaka ny fahatokisan-tena tamin'ny fanatanjahan-tena ary ny hery iraisana dia nangonina tamim-pahanginana tamina fahasambarana tsy manam-petra.
Nilaza ny rehetra fa hanokana ny tenany hiasa amina toe-tsaina tsaratsara kokoa amin'ny ho avy, ary "hifantoka sy hanambatra ny ezaka handresena ireo zava-tsarotra ary hivoatra eo aloha" mba hanampy miaraka amin'ny fampandrosoana vaovao ny rakikira kely!
Fanomezana Spa Bath, Fanomezana fanomezana ho an'ny Spa Spa, Napetraka fanomezana Krismasy, Fizera fandroana, Fitaovana fanomezana Spa Bath, Fanomezana fanomezana spa fandroana spaoro,